Ethiopian Airlines iyo Liege Airport waxay kordhiyeen heshiiska iskaashiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ethiopian Airlines iyo Liege Airport waxay kordhiyeen heshiiska iskaashiga
Airlines • Airport • Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Itoobiya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Gegada diyaaradaha ee Liege, waa garoonka ugu weyn ee xamuul ee Belguim iyo garoonka 6aad ee ugu weyn ee xamuul ee Yurub, wuxuu sii ahaan doonaa xarunta xamuulka ee Ethiopian Airlines oo u noqon doonta marin xamuul inta udhaxeysa Afrika iyo Yurub shanta sano ee soo socota.
Diyaaradda Ethiopian Airlines ee Xamuulka iyo Saadka ayaa la shaqeyneysay garoonka diyaaradaha Liege howlaheeda xamuul ee u kala gooshaya Afrika iyo Yurub.
Iyagoo kaashanaya Liege Airport, Ethiopian Cargo iyo Logistics Services waxay si xawli ah uqabanayeen adeeg xamuul xamuul Yurub iyo wixii ka baxsanba muddo 15 sano ah.
Mustaqbalka xarun xamuul oo u heellan ayaa laga dhisi karaa Liege North, taas oo ay Itoobiyaanku ahayd macmiilka ugu horreeya ee lagu bilaabayo.
Adeegyada Xamuulka iyo Saadka ee Ethiopian Airlines iyo Madaarka Liege waxay shaaciyeen inay cusbooneysiiyeen heshiiskoodii wada shaqayneed ee muddada dheer socday ilaa iyo sanadka 2026. Liege Airport, garoonka ugu weyn ee xamuul ee Belguim iyo garoonka 6aad ee ugu weyn ee xamuul ee Yurub, wuxuu sii ahaan doonaa xarunta xamuulka ee Ethiopian Airlines oo u adeegi doonta marin xamuul oo udhaxeysa Afrika iyo Yurub marka xigta shan sano. Shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines Cargo iyo Logistics, oo ah shirkadda ugu weyn ee xamuulka ka wada qaaradda Afrika, ayaa waxay kala shaqeyneysay garoonka diyaaradaha ee Liege howlaheeda xamuul ee u kala gooshaya Afrika iyo Yurub.
Adeegyada Xamuulka iyo Saadka ee Ethiopian Airlines Kusimaha agaasimaha maareeyaha, Mudane Enquanhone Minyashal ayaa yiri "Waxaan ku faraxsanahay inaan dib u cusbooneysiinay heshiiski wadashaqeyn ee naga dhaxeysay garoonka diyaaradaha ee aan wada shaqeynta la leennahay xili aan diiwaan galineyno koror aad u baaxad weyn oo ku wajahan meelaha xamuulkeena iyo awoodayada. Iyadoo lala kaashanayo garoonka diyaaradaha ee Liege, xamuulka Itoobiya iyo Adeegyada Saadka ayaa si xawli ah u bixinayay adeegga xamuulka xamuul Yurub iyo meelo ka baxsanba 15-kii sano ee la soo dhaafay ee iskaashiga guusha leh. Shanta sano ee soo socota, waxaan ka shaqeyn doonnaa sidii aan wax uga beddeli lahayn hawlgalkeenna xamuul si aan ugu adeegno Yurub si ka wanaagsan iyadoo aan ballanqaadkeenna cusbooneysiinayno garoonka diyaaradaha Liege. Maaddaama ay tahay shirkadda ugu weyn ee duulimaadyada Afrika, Ethiopian Airlines waxay sii wadi doontaa xoojinta iskaashiga ay la leedahay Liege Airport si kor loogu qaado howlaheeda xamuulka ee u dhexeeya Afrika iyo Yurub.
Steven Verhasselt, VP Commercial of Liege Airport ayaa yiri “Marka ugu horeysa, garoonka diyaaradaha Liege wuxuu jeclaan lahaa inuu ugu hambalyeeyo Ethiopian Airlines iyo dhamaan shaqaalaheeda iyo la-hawlgalayaasheeda dhalasho aad u wanaagsan oo 75 sano jirsatay. Waa sharaf weyn inaan qayb ka nahay sheekada guusha ee Itoobiyaanka muddo ku dhow 15 sano LGG waxay sii ahaan doontaa xarunta xamuulka Ethiopian Airline ee Yurub. Dib u jaleec bilowgii ilaa maanta halka aan jogno, Ethiopian waxay horeyba usameysay 15,000 duulimaad oo xamuul ah LGG, waxayna kudhowdahay 1 milyan tan oo xamuul ah oo xamuul ah. Weli, Steven Verhasselt wuxuu muujiyaa, tani waa waqtigii la soo dhaafay waxaana loo qaadan karaa inay tahay bilow aad u cajaa'ib leh. Maanta, waxaan u dabaaldegnaa mustaqbalka.
Itoobiya iyo LGG waxay cusbooneysiiyeen heshiiskooda iskaashi ee aan kaliya xaqiijinaynin xarunta xamuulka Yurub ee LGG ee 5ta sano ee soo socota laakiin sidoo kale sheegaysa in Ethiopian-ka ay waxbadan ka badnaan doonaan diyaarad ku duusha LGG. Mustaqbalka xarun xamuul oo u heellan ayaa laga dhisi karaa Liege North, taas oo ay Itoobiyaanku ahayd macmiilka ugu horreeya ee lagu bilaabayo. Waxaan aad u sugeynaa talaabadan xigta oo ka caawin doonta Ethiopian-ka inay si wanaagsan ugu adeegto macaamiisheeda. In ka badan abid, LGG waxay xarun u noqon doontaa Ethiopian-ka iyo marinka xamuul ee ugu weyn ee u dhexeeya Afrika iyo Yurub. ”
Sida ku xusan warbixinta African Airlines Association (AFRAA), Ethiopian waxaa kaalinta koowaad ka galay rakaabka iyo xamuulka sannadka 2020. Ethiopian waxay qaadatay 500 kun oo tan oo xamuul ah iyo 5.5 milyan oo rakaab ah iyada oo sii marisay xarunteeda weyn, Addis Ababa Bole International Airport.